Kpọtụrụ anyị - Molooco
Nke mbụ, gaa na ụlọ ahịa anyị na Molooco
Ọ bụ ya! Dị mfe
Anyị na-ebugharị enye iwu ka anyị na-eziga nzipu ozi.
Mgbe anyị mechara nhazi iwu gị, anyị ga-eziga ya na ụlọ ọrụ mbupu ya ma ha ga-edozi ya kpamkpam. Mgbe ị rutere n’obodo gị, ndị ọrụ nzipu ozi obodo gị ga-edozi ya. Biko biko jiri nwayọ kpọtụrụ post gị mgbe ọ bịarutere mba gị.
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ a nabatara na Bizzoby?
Anyị na-anabata Paypal, debit / kaadị kredit na cryptocurrencies.
Anyị na-ebugharị ụwa nile na oge mbufe anyị na-abụkarị n'ime 7-10 ụbọchị azụmahịa na USA, na 12-1Businessbọchị azụmaahịa 5 mba ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ nwere ike buru oke 20 bọchị azụmahịa iji rute dabere n'ọnọdụ gị yana ogologo oge ọ ga-ewe iji nweta omenala gị
Enyewo m iwu ka ịba ụba ihe ma ha niile eruteghị
Nkezi ọkwa 2.1 / 5. Ọnụ ọnụ ọgụgụ: 9